ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်လူငယ်များကြားကျေနပ်ရောင့်ရဲခြင်း (၂၀၀၈) - Your Brain On Porn
မှတ်ချက်များ YBOP: ဒီလေ့လာမှုကမကြာခဏ porn အသုံးပြုမှုကိုအဘယ်သူမျှမထိခိုက်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအထောက်အထားအဖြစ် (sexologists ဖြင့်ဖြစ်စေ) မွှမ်းတင်ထားသည်။ ရက်စွဲ 2010 ကြောင်းမှတ်ချက်ပေမယ့်ဒေတာများကို 2006 ကနေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအနည်းငယ်အဆိုပါဘာသာရပ်များ၏မည်သည့်မေးခွန်းအတွက်အချိန်ကာလအတွင်းမြန်နှုန်းမြင့်ခဲ့လျှင်ဆိုလိုတာက, အသက် 14 မှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောအရာကိုအပေါ်တစ်ဦးနောက်ကြောင်းပြန်လေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။
ဆန်းစစ်ချက်: နိုဝင်ဘာလ 2006 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးယေဘုယျ e-mail, မက်ဆေ့ခ်ျကိုတော်တော်များများ-Croatian တက္ကသိုလ်များနှင့်အီလက်ထရောနစ်ဖိုရမ်များ၏နံပါတ်မှာကောလိပ်ကျောင်းသား '' မေးလ်စာရင်းထံသို့စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာသုတေသနလေ့လာမှုတစ်ခုအတိုချုပ်ရှင်းလင်းချက်, On-line ကိုမေးခွန်းလွှာဖို့ link ကို, သူတို့၏မိတ်ဆွေများနှင့်တစ်ဦးအခြို့သောအသက်အရွယ် (18-25) ၏အသိအကျွမ်းဖို့မက်ဆေ့ခ်ျကို forward ပြုလုပ်ပေးဖို့လက်ခံသူဟုမေးရာတောင်းဆိုချက်တစ်ခုပါရှိသည်။
အပြည့်အဝငျသငျတနျး FROM မှ
မှတ်ချက်များ - အချက်အလက်များကိုအကဲဖြတ်ရန်သူတို့ကိုယ်ပိုင်ပုံစံကိုတီထွင်ခဲ့သည် - လိင်မှုဆိုင်ရာ Scripts ထပ်နေသည် - သာသူတို့ကသာသူတို့ကအသုံးပြုခဲ့ကြပြီးကတည်းက, ဘယ်လောက်တရားဝင်ငါသိ၏။
ဆန်းစစ်ချက်: ပထမ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု-အပြုသဘော, အပျက်သဘောသို့မဟုတ်စောစော SEM ထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ scripting နည်းကကမကထပြုခဲ့ခြင်းကိုပေါင်းစပ်-လိမ့်မယ်။ အပြုသဘောသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းပညာရေးဆိုင်ရာအကျိုးခံစားခွင့်သို့မဟုတ်တစ်ဦးထက်ပိုမတူညီလိင်အသက်တာ၌ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည့် SEM ၏သတင်းအချက်အလက်များအကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။
မှတ်ချက်များ - စာရေးသူ၏အမြင်တွင်“ ပိုမိုကွဲပြားသည်” = အပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်။ ဒါပဲ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်ဤ“ အပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်” ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်စွမ်းရှိသည်မှာသေချာသည်။
ဆန်းစစ်ချက်: ဖြစ်နိုင်ချေအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုသည် ကျနော်တို့စိတ်ခံစားမှုပါဝင်ပတ်သက်မှု၏အဆင့်ကိုအကဲဖြတ်ရန်ကြားဆက်ဆံရေးနွေးထွေးမှုတိုင်းတာ။ ရငျးနှီး၏ညွှန်ပြချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှိရာသို့ သွား. များအတွက် proxy ကို SEM အသုံးပြုမှုနှင့်အတူတိုးမြှင့်ဖို့အကြံပြုခဲ့သည့် (ရငျးနှီး၏မရှိခြင်း) (; ပေါလုသည် 2006; Zillmann, 2005 Manning, 2000) အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
comments: ဤလေ့လာမှုအတွက်အကဲဖြတ်အဆိုပါအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းသောရငျးနှီးဖြစ်ခဲ့သည်။ အောက်တွင်သူတို့သည်တွေ့ကားအဘယ်သို့:
ဆန်းစစ်ချက်: အစောင့်ကြည့်လေ့လာအပြုသဘောသက်ရောက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ၏အကွာအဝေးနှင့်ဆက်စပ်လျက်နေကြစဉ်တွင်, ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကြားဆက်ဆံရေးနွေးထွေးမှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည်။
မှတ်ချက်များ။ ဒီတော့… .less ရင်းနှီးမှု၊ ဤလေ့လာမှုသည်ပြသခြင်းဖြစ်သည် porn မရှိအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ? သူတို့ဟာဒီထက်ရငျးနှီးသာ fetish porn ကိုသုံးသူယောက်ျားတွေနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဖော်ပြ။ ဘယ်နှစ်ယောက်ဆယ်ကျော်သက် fetish porn အသုံးပြုသနည်း 2013 ခုနှစ်တွင်?
Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2010 Feb;39(1):168-78. doi: 10.1007/s10508-008-9387-0.
Stulhofer တစ်ဦးက, Busko V ကို, Landripet ငါ.
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများသည်မျက်မှောက်ခေတ်တွင်များပြားလာသော်လည်းလူငယ်များ၏လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်သာသိရှိရသေးသည်။ ဤဆောင်းပါး၌လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းများ (SEM) ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုသီအိုရီပုံစံတင်ပြထားသည်။ ၎င်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ scripting မှကမကထပြုပြီးအသုံးပြုသော SEM အမျိုးအစားအားဖြင့်တည်းဖြတ်သည်။ ထည့်သွင်းကြောင်း On-line ကိုစစ်တမ်း Datasets 650-18 နှစ်ပေါင်းအသက် 25 ငယ်ရွယ်-Croatian ယောက်ျား မျက်မြင်လက်တွေ့စံပြစူးစမ်းဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
ဖော်ပြရန်တွေ့ရှိချက် 14 ၏အသက်အရွယ်မှာ SEM အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေ, လက်ရှိ SEM အသုံးပြုမှု, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပျင်း, လိင်ဒဏ္ဍာရီများ၏လက်ခံမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ၏ကြိမ်နှုန်းအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့် paraphilic SEM အသုံးပြုသူများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုမှထောက်ပြခဲ့သည်။
စံပြစမ်းသပ်ခုနှစ်တွင်တစ်ဝတ္ထုတူရိယာအသုံးပြုခဲ့သည်, ထိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Scripts လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေးအပေါ် SEM ရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတိုင်းတာရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ, Scale ကိုထပ်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်း ဆန်းစစ်ခြင်းများအရ SEM သည်ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသားများ၏လိင်စိတ်ကျေနပ်မှုအပေါ်အစောပိုင်းထိတွေ့ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ၊
နှစ်ဦးစလုံးအပြုသဘောနှင့် အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှု-The ရငျးနှီး၏ဖိနှိပ်မှုမှတဆင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခံရဆုံးစွန်သာ paraphilic SEM အသုံးပြုသူများအကြားလေ့လာတွေ့ရှိ -were ။ SEM စောစောထိတွေ့မှု၏အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်သည့်ခေတ်ရေစီးကြောင်း SEM အသုံးပြုသူများသည်သူတို့တွင်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကိုယ်ကျင့်တရားထိတ်လန့်ညှိ ဒါပေမယ့်လည်းညစ်ညမ်း, လိင်ပညာရေးအစီအစဉ်များအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေမီဒီယာစာတတ်မြောက်ရေးကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းပုံရိပ်ဝေဖန်အနက်အတွက်လူငယ်များအထောက်အကူပြုမယ်လို့အကြောင်းအရာများကိုထည့်သွင်းသင့်ပါတယ်။